Lena Hallengren oo cadeesay in uu ku dhacay Cudurka Cansarka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenLena Hallengren oo cadeesay in uu ku dhacay Cudurka Cansarka
April 11, 2021 Wararka Sweden, Wararka Maanta Somaliska 0
Wasiirka arrimaha bulshada, Lena Hallengren , ayaa ku dhawaaqday inay bilowday daaweynta kansarka naasaha, tani waxay ku timid wareysi ay siisay TV4.
Intii lagu guda jiray wareysiga, wasiirku wuxuu sharraxay sida ra’iisul wasaaraha, Stefan, uu uga falceliyay markii ay u sheegtay xanuunkeeda.
“Dabcan xoogaa wuu naxay,” ayay tiri. Waxaan u maleynayaa in dadka badankood ay sidaas oo kale sameyn lahaayeen. Isfaham weyn ayuu lahaa. ”
Wasiiradda ayaa xaqiijisay in dhawaan lagu sameeyay qaliinka naasaha, hadana la filayo inay bilawdo qaadashada daawada kiimikada.
Waxay raacisay, “Xaqiiqdii waxaan dareemayaa wanaag aad u wanaagsan, laakiin waxaan xaqiiqsaday in daaweynta kiimikada ay saameyn ku yeelan doonto jirka.”
Intii lagu guda jiray wareysiga, Hallingrin waxay ku dartay inaysan ku “baqi doonin” shaqadeeda, inkasta oo ay daciif noqon doonto maalmaha qaar. Sidoo kale kama walwalayo in furfurnaanta cudurka ay saameyn ku yeelato isku kalsoonideeda.
Waxaan nahay bini aadam, siyaasadu waa qayb weyn oo aniga iyo noloshayda kamid ah, laakiin sidoo kale waxaan ahay qof bini aadam ah, marka waxaa fiican inaan daacad ka ahaado caqabadaha aan wajahayo iyo cawaaqibka ay ku yeelan karaan, ”ayay raacisay.
Isla mar ahaantaana, wasiiradu wuxuu carabka ku adkeeyay inay diyaar u tahay xaqiiqda ah inay ku qaadan karto fasax jirro haddii caafimaadkeedu sii xumaado.
Ra’iisul wasaare Stefan Löfven ayaa faallo uu siiyay TV-ga Sweden ku sheegay in “uu ku dadaali doono sidii uu u taageeri lahaa Lena Hallengren qaabka ay rabto.”